Vatsigiri venhabvu munyika vari kutarisira kuenderera mberi nemhemberero yavo mushure mekutora mukombe weCosafa Castle Cup apo chikwata chavo chiri kupinda muSam Nujoma Stadium nesvondo mumutambo wavo wekutanga weChampionship of Africa Nations (Chan) nemaBrave Warriors ekuNamibia.
Murairidzi wechikwata cheCosafa, Sunday Chidzambwa akatendwa neveZifa nekupihwa zvekare basa rekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumakundano eChampionship of Africa Nations ayo achaitirwa kuKenya muna Ndira.
Makundano aya ndeevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete zvekuti Chidzambwa awedzera vatambi vakaita saAbbas Amidu, na Moses Muchenje veCaps United, Denver Mukamba, Emmanuel Mandiranga naObey Mwerahari veDynamos, Divine Lunga weChicken Inn, Francesco Zikumbawire weZPC Kariba, naJimmy Dzingai weYadah avo vatsiva vatambi venotamba kuSouth Africa vanga vari muchikwata chake cheCosafa.
Chikwata ichi chasimuka nhasi masikati chakananga kuWindhoek apo Dzingani ati ari kufara zvikuru kuwana mukana wakadai achitarisa iye kuti kune vatambi vakawandisa vanodawo kuve muchikwata chemaWarriors ichi.
Zimbabwe neNamibia dziri kusangana mumitambo miviri, chikwata chinokunda mumitambo iyi chichibudirira kuenderera mberi kunosangana ne chikwata chichakunda pakati peComoros neLesotho munzira yekuenda kuKenya.
Kaputeni weZimbabwe Ocean Mushure anoti zvakakosha kuti vanokunda kuNamibia kuitira kuti vazvi rerutsire mumutambo wavo wechipiri muNational Sports Stadium svondo rinouya
Kunyange hazvo Ovidy Karuru naKnox Mtizwa avo vaikanda zvibodzwa kuCosafa Castle Cup vasiri muchikwata ichi, Chidzambwa ane vatambi vakaita saPrince Dube, Abbas Amidu, naDenver Mukamba avo vane nhoroondo yakasimba yekuona pane mambure.
Chidzambwa uyo akaita mukurumbira nekutora mukombe wake wechitatu weCosafa Castle Cup, uye wechishanu weZimbabwe, ndiye zvekare murairidzi wekutanga kuendesa Zimbabwe kuma Championship of Africa Nations mugore ra 2009.
Vanoziva Chidzambwa saVaWitness Macheka vanoti murairidzi uyu haatadze kubudirira pane zvaanenge atanga vachiti ivo naChidzambwa, Zimbabwe ichadambura Namibia neLesotho kana Comoros pamwe nekuenda kumafainari emakundano aya.
VaMacheka vanoti Chidzambwa ave pamberi. Zvakamira zvakadai. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenda kuzororo yemasvondo maviri kunze kwezvikwata zvine mitambo neCaps United iyo yakasaririra nemhaka yekukwikwidza kwavo muCaf Champions League.
Mugwaro rakatumirwa kuvatori venhau neaanotaura akamirira Premier Soccer League muzvare Kudzai Bare mitambo yemakundano aya ichasimuka zvekare musi wa 26 Chikunguru nemutambo mukuru pakati peFC Platinum neDynamos kuMandava Stadium.
Panguva yezororo iyi zvikwata zviri kupihwa mukana kusvika musi wa 31 Chikunguru wekutenga vatambi vatsva kusimbisa zvikwata zvavo vakananganga nekutora mukombe kana kudzivirira kubuda mumakundano aya nemhaka yekukundikana.
Parizvino Black Rhinos ndiyo iri pamusoro soro pemakundano aya nemapoinzi makumi matatu nerimwechete vakaenzana neNgezi Platinum Stars vachiteverwa neDynamos iyo ine mapoinzi makumi matatu.
Murairidzi weDembare Lloyd Mutasa, uyo ari mukamba nechikwata chenyika chemaWarriors, anoti zororo iri ringangokanganisa matambiro anga achiita chikwata chake icho change chichibhebha moto mushure mekukunda mumitambo mitanhatu nekuita mangange mumutambo mumwechete, pamitambo minonwe yavatamba yakateverana.
Panodzoka mitambo iyi hapana imwe zororo ichaitwa sezvo vePremier Soccer League varikuda kuti mitambo yemwaka uno ipere musi wa 30 Mbudzi usati wasvika.
Chikwata chinotora mukombe weligi chinofanira kunyoreswa kukwikwidza muCaf Champions League gore rinouya musi wa 30 Mbudzi usati wapfuura.